2 Mbido iCloud u
1.What eme iCloud ndabere
2.How aka iCloud ndabere na Apple ngwaọrụ
3.How iji aka ndabere ka iCloud
4.How iji weghachi iCloud ndabere ka iOS ngwaọrụ
5.Use Wondershare Dr.Fone maka iOS iji weghachi iCloud ndabere selectively
Ugbu a, anyị nile maara na iCloud bụ online nchekwa ozi e site Apple na ọ bụghị naanị-eme ka ọ dị mfe jikwaa anyị iOS ngwaọrụ ma na-enyekwara anyị na-eme na-akpaghị aka. Ọrụ nwere ike iji iCloud ka ijikwaa ọdịnaya na iPad, iPhone, Apple TV, Mac na iTunes na a mma ma ndị ọzọ irè ụzọ.
Ọ mbụ e-e mere na i nwere ike rụọ ọrụ gị iPhone ma ọ bụ iPad enweghị enyemaka nke a na kọmputa. Site n'enyemaka nke iCloud ugbu a ị pụrụ nanị atụgharị na ngwaọrụ gị, abanye na na gị Apple ID na mgbe ahụ Mbido ọhụrụ iPhone ma ọ bụ iPad iji otu nke gara aga iCloud backups.
Gịnị ka iCloud ndabere
iCloud echekwa gị niile data na sava nke Apple, mere na ọ bụrụ na ị mkpa iji kwalite, dochie ma ọ bụ re-wụnye otu nke gị iOS ngwaọrụ i nwere ike ime na gị nile ẹdude ntọala na-enweghị adịkwa si na ihe ọ bụla nke gị ọdịnaya. Ọ na-adịghị ndabere iTunes music, TV na-egosi, na fim dị ka ndị a nwere ike ịbụ download ọzọ Otú ọ dị niile ngwa kpọmkwem data na-kwadoo iCloud mere na mgbe oge nke re-nbudata ngwa ọdịnala bụ otu ụzọ dị ka ha nọ n'ihu.
Otú e si enyere iCloud ndabere na iche iche na ngwaọrụ
Jikọọ gị iOS ngwaọrụ gị WiFi netwọk. Ugbu a, na-aga Ntọala> iCloud> ndabere ma ọ bụ Nchekwa & ndabere (dabere ma na ị nwere iOS 9, iOS 8 ma ọ bụ iOS 7) ma hụ na nhọrọ nke 'iCloud ndabere' na Switched on. Pịa na nhọrọ 'Back Up Ugbu a' na-amalite na-eke ọhụrụ ndabere ugbu a na iCloud.
Gosi na nkwado ndabere na mpaghara n'ezie e kere. Gaa na Ntọala> iCloud> Nchekwa> Jikwaa Nchekwa na mgbe ahụ, mgbe ị pịa na ngwaọrụ gị, ị kwesịrị ị na-enwe ike ịhụ nkwado ndabere na mpaghara na ị dị nnọọ kere.
Mara - Ozugbo nhọrọ nke 'iCloud ndabere' na agbanwuru, iCloud na-akpaghị aka Akwadoo elu ngwaọrụ gị na a kwa ụbọchị. Otú ọ dị n'ihi na ngwaọrụ gị ga-ejikọrịrị a ike isi iyi, ejikọrọ WiFi na ihuenyo ga-akpọchi.
Hụ na gị na Mac na-agba ọsọ ọhụrụ version nke OS X. Ị nwere ike na-aga Apple menu wee họrọ Software Update ka ibudata ọhụrụ version ma ọ bụrụ na i nwere adịghị ugbua.
Ugbu a ịgbanwee na iCloud nke ị ga-aga Apple menu> System Mmasị> iCloud na ibà gị Apple ID na mgbe ahụ akpatre họrọ ọrụ, ị chọọ nyeere.
Wụnye iCloud maka Windows (7 ma ọ bụ 8 bụ chọrọ) na kọmputa gị site na ịpị ebe a.
Ẹkedori iCloud na ugbu a gị banye Apple ID wee họrọ ọrụ ị ga-achọ inwe ike maka ndabere.
Olee otú aka ndabere ka iCloud
I nwekwara ike iji aka ndabere ka iCloud on ọ bụla nke gị iOS ngwaọrụ nanị site na ịnweta iCloud (dị ka e gosiri n'elu) dị iche iche na ngwaọrụ na mgbe ahụ na ịpị na nhọrọ 'ndabere Ugbu a' ma ọ bụ 'ndabere' dabere na nke nke ngwaọrụ Ị na-eji nkwado ndabere na mpaghara on iCloud.
Olee otú iji weghachi iCloud ndabere ka iOS ngwaọrụ
Gaa na Ntọala> Ozuruọnụ> Software Update na gị iOS ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị na-ahụ a ọhụrụ version nke iOS ebe a -then download na wụnye ya.
Ugbu a, na-aga Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia wee pịa na nhọrọ 'Ihichapu ọdịnaya niile na ntọala ".
Họrọ 'Mee elu ngwaọrụ gị' na Mbido nnyemaaka na pịa Weghachi si a ndabere. Banye na iCloud ugbu a.
Họrọ a ndabere na ndepụta dị n'okpuru 'Họrọ ndabere'.
Jiri Wondershare Dr.Fone maka iOS iji weghachi iCloud ndabere selectively
Wondershare Dr.Fone Maka iOS bụ ụwa mbụ iOS data mgbake ngwá ọrụ na ọ bụ a n'ụzọ zuru ezu ike ngwọta maka agbake nile di iche iche nke na-ehichapụ data on iPhone, iPad iPod Touch dị ka ozi, kọntaktị, foto, ndetu wdg
Na-enye gị ụzọ atọ iji weghachite ehichapụ foto site na iPhone 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Ozugbo i arụnyere Wondershare Dr.Fone na kọmputa gị, ebe a bụ otú ị pụrụ iji ya iji weghachi iji iCloud ndabere.
Launch Wondershare Dr.Fone maka iOS wee họrọ nhọrọ nke 'naputa site na iCloud ndabere faịlụ'. Ị kwesịrị ị na-ahụ ihe niile na mgbake ụdịdị n'elu nke isi window. Ugbu a, ị ga-jụrụ gị banye Apple ID.
Ozugbo i ọma ite ke na gị Apple ID, Dr.Fone ga-ahụ ma depụta niile dị iCloud backups maka gị. Họrọ onye na ị chọrọ iji na pịa on 'Download'.
Site ọzọ window na Pop elu, họrọ faịlụ na ụdị na ị ga-achọ ka ebudatara maka a weghachi na pịa on 'Next'. Mgbe ahụ, kụrụ 'iṅomi' iji malite usoro.
Ozugbo Doppler na-okokụre, ị nwere ike ihuchalu niile faịlụ na-e gị iCloud ndabere. Nanị pịa bọtịnụ 'Naghachi' na-azọpụta ha na gị na kọmputa na mgbe nyefee ha gị iOS ngwaọrụ.
> Resource> iCloud> Ihe niile mkpa ka ị mara banyere iCloud ndabere